မြ၀တီ - နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်သည် တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည် ထွက်ခွာတော့မည့် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ဟန်ဂေရီ သံအမတ်ကြီးနှင့် အိုင်ယာလန် သံအမတ်ကြီး တို့အား သီးခြားစီ လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်သည် တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည် ထွက်ခွာတော့မည့် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ဟန်ဂေရီ သံအမတ်ကြီးနှင့် အိုင်ယာလန် သံအမတ်ကြီး တို့အား သီးခြားစီ လက်ခံတွေ့ဆုံ
Friday, 13 July 2018 08:32	font size decrease font size increase font size
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်သည် တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည်ထွက်ခွာတော့မည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဟန်ဂေရီ သံအမတ်ကြီး H.E. Dr. Peter JAKAB နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိုင်ယာလန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. BrendanGerard Rogers တို့အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော် သမ္မတ အိမ်တော် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ သီးခြားစီ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဟန်ဂေရီ သံအမတ်ကြီး နှင့်တွေ့ဆုံစဉ် နှစ်နိုင်ငံ သံတမန် ဆက်ဆံရေးနှင့် ချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှု တိုးမြှင့်ရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဆောင်ရွက်မှုများအား ထောက်ခံ ပေးနေမှု၊ ပညာရေးကဏ္ဍတွင် အကူအညီများ ပေးအပ် နေမှုနှင့် နှစ်နိုင်ငံအကြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပိုမိုတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်သွားရေး ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိုင်ယာလန် သံအမတ် ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေး၊ လူသား ချင်း စာနာထောက် ထားမှုအကူအညီများပေးအပ်နေမှုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးကြသည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲများသို့ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ရုံး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်း၊ သမ္မတ ရုံး ၀န်ကြီးဌာန ဒုတိယ ၀န်ကြီး ဦးမင်းသူနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
Read 15 times	Last modified on Friday, 13 July 2018 08:51
More in this category: « ၀င်းနိုင်ထွန်း၏ နောက်ကျ သွင်းဂိုးဖြင့် ထိုင်းကို အနိုင်ယူပြီး မြန်မာ ယူ-၁၉ အသင်း ဗိုလ်လုပွဲတက်	နေပြည်တော်ရှိ နယ်မြေခံ တပ်မတော် ဆေးရုံတွင် အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းရောဂါများကို ၀မ်းဗိုက်အတွင်း မှန်ပြောင်းဖြင့် ခွဲစိတ်ကုသ »